Youtube dia manova ny tambajotrany indray | Avy amin'ny Linux
Youtube dia manova ny interface web azy indray
Hatramin'izao Google Nanova ny fananany maromaro izy, noho izany Niova ihany koa ny Youtube tamin'ny fampifanarahana tranonkala vaovao.
El bilaogy Youtube ofisialy Manambara aho fa ny tarehy vaovao an'ny tranonkalanao dia nohaingoina mba hahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny fomba mora sy mora kokoa amin'ny fantsona sy ny atin'ny famandrihana azy ireo.
La interface tsara etsy ambony dia tsy ratsy, fa ny fikasana hampiditra ny Google+ izay nampisavoritaka indraindray ary nanelingelina ny mpampiasa sasany mihitsy aza. Miaraka amin'ny interface Youtube vaovao Ny tarehy madio kokoa dia tsikaritra ary, efa afaka ho an'ny rehetra, mampanantena fa ho mailaka kokoa ary mora ampiasaina.
Ho an'ireo izay somary sosotra amin'ny fanovana ny teknolojia ary fanovana ny sary, ity Youtube vaovao miantoka ny fahafaha-manao bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa, manome tolo-kevitra ny fantsona ary manamora ny fisoratana anarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Youtube dia manova ny interface web azy indray
Azo alaina ao amin'ny laharana faharoa amin'ny HDMagazine
Miaraka amin'ny terminal: Mampiasa fanehoan-kevitra mahazatra II: fanoloana